Fampiharana Android: hevitra, famoahana vaovao, maimaim-poana ary maro hafa! | Androidsis (Pejy 24)
Epic Launcher dia manome ny style Kit Kat ho an'ny Android
Epic Launcher dia mpandefa maimaimpoana maimaimpoana ho an'ny Android izay manolotra antsika ny fiasa hanovana ny Android ho lasa fisehoan'ny Kit Kat.
SoundCloud dia rindranasa maimaim-poana izay mamela antsika hihaino mozika an-tserasera sy hizara amin'ny namantsika rehetra.
WallpaperHaa, sary an-jatony an-jatony tonga ao amin'ny Android-nao
Androany aho mitondra fampiharana anao izay tsy hamela anao hisintona sary an-jatony HD an-jatony mivantana amin'ny Android.
Apex Launcher 2.2 Beta dia mampihetsika ny mangarahara amin'ny bara fitetezana sy fampandrenesana
Apex Launcher beta dia mifantoka amin'ny fampandehanana ny mangarahara amin'ny bara fitetezana sy fampandrenesana izay entin'ny Android 4.4 KitKat ho zava-baovao miavaka.
Makà toerana fitahirizana rahona 50GB maimaimpoana miaraka amin'i Mega
Mega dia rindrambaiko maimaimpoana tanteraka ho an'ny Android izay tsy manolotra afa-tsy mihoatra ny 50GB fitehirizana rahona maimaimpoana ho anao.
Fanavaozana vaovao ny mpandika teny Google ofisialy, Google Translate (APK download)
Eto ianao manana ny APK ho fisintomana mivantana ny kinova farany an'ny Google Translate, ilay mpandika teny tsara indrindra ho an'ny Android.
Fampiharana tsy mampino ho an'ny Android, anio MacroDroid
MacroDroid dia iray amin'ireo rindranasa ho an'ny Android izay manamora ny asa na ny laharam-pahamehana amin'ny fijanonana amin'ny terminal.
Ny fampiharana SmartGlass ho an'ny Xbox One dia ao amin'ny Google Play ankehitriny
SmartGlass dia azo sintonina izao hiomanana amin'ny fanombohana ny Xbox One, ny console vaovao an'i Microsoft, ny zoma 22 novambra.
Ny fampiharana roa synthesie roa ho an'ny Android
Izahay dia mitondra anao ny fampiharana roa tsara indrindra ho an'ny synthesis amin'ny feo amin'ny Android toy ny SVOX sy IVONA izay mameno tsara ny rindranasa default.
Mandrosoa Google Kit Android 4.4 Kit Kat ho an'ny Android rehetra
Androany dia te hizara aminareo rehetra aho ny Google Experience Launcher natolotry ny mpampiasa XDA Developers manan-kery ho an'ny kinova Android rehetra.
Ny Dolphin Browser dia havaozina amin'ny alim-pandihizana amin'ny alina ary vahaolana amin'ny olan'ny zoom amin'ny Android 4.4
Dolphin Browser dia iray amin'ireo mpitety tranonkala tsara indrindra izay hitanao amin'ny Android ary nohavaozina tamin'ny alim-pandihizana vaovao sy fanamboarana bibikely.
Androany aho te-hanolotra anao fampiharana maimaim-poana tanteraka izay hahafahanay mampandeha ny fiasan'ny Chat Heads ao amin'ny fampiharana WhatsApp anao.
Ny baikon'ny feo Google Now rehetra
Google Now dia mety ho lasa iray amin'ireo serivisy Google manan-danja indrindra amin'ny Android, noho ny fahamaroan'ny baikon'ny feo ananany.
Google Play Film amin'ny fampiroboroboana, misintona sarimihetsika fohy mihetsika maimaim-poana
Mandritra ny fotoana voafetra, Google Play Movies dia manolotra antsika ny fampidinana an'i Shaun the Sheep The Big Chase, horonantsary fohy mihetsika feno maimaim-poana.
1TB fitehirizana rahona maimaimpoana miaraka amin'i TFolder
TFolder dia fampiharana ho an'ny Android izay manolotra tahiry 1TB ho antsika maimaimpoana ao anaty rahona
Sintomy ny APK BBM nohavaozina ho an'ny Android (15/11/2013)
Eto ianao manana ny APK ho an'ny fampidinana mivantana ny fanavaozana BBM farany ho an'ny Android.
Ny fomba firesaka vaovao miaraka amin'ny baiko Google Now sasany
Ny fanavaozana lehibe azon'ny Fikarohana Google dia ahafahantsika miresaka kely amin'ny Google Now amin'ny terminal Android-nay.
Ny famolavolana Facebook Messenger vaovao dia efa azon'ny rehetra ao amin'ny Google Play
Facebook Messenger dia mandray fanavaozana izay manolotra endrika vaovao mifanaraka amin'ny andrasana amin'ny tambajotra sosialy malaza.
Ny fanavaozana lehibe ny Fikarohana Google dia mitondra fampiasa KitKat ho an'ny fitaovana taloha
Google Search dia nahazo fanavaozana vaovao lehibe miaraka amin'ny fanatsarana lehibe toy ny fanohanan'ny GEL, karatra vaovao ary fomba firesaka.
Google Plus fanavaozana vaovao misy APK
Efa manana fanavaozana vaovao hafa an'ny Google Plus izahay izay misy fanatsarana lehibe toy ny fampidirana ny teknolojia NFC hizara atiny
Google dia namela ny mpandefitra Google Experience ho fanitsiana ho an'ny Nexus 5, saingy azonao atao ny mametraka azy raha manana Android 4.4 amin'ny fitaovana Nexus hafa ianao.
Dayframe dia rindrambaiko nomerika mahafinaritra sy manokana ho an'ny Android
Dayframe dia ho lasa fampiharana manokana ho an'ny Android miaraka amin'izay ho sarin'ny tamba-jotra sosialy
Ny tanànan'ny Camera Awesome amin'ny Android avy amin'ny iOS
Ny Camera Awesome dia tonga amin'ny Android avy amin'ny iOS miaraka amin'ny fisintomana maherin'ny 20 tapitrisa ary isa mihoatra ny 4.5 isa ao amin'ny Apple App Store.
Nova Launcher 2.3 beta dia mitondra fihodinana mankany amin'ny Android 4.4 KitKat [Download APK]
Nova Launcher dia iray amin'ireo mpandefa Android malaza indrindra azonao jerena ao amin'ny Google Play, miaraka amin'ny fahaiza-manao avo lenta.
Mandefa rindrambaiko Android mandoa vola anao hampiasa ny findainao i Gatwin
Gatwin dia misy famandrihana amin'ny alàlan'ny fisoratana anarana mivantana ao amin'ny tranokala gatwin.com.
Sintomy ary apetraho ny LG Optimus G2 Launcher vaovao
Eto ianao manana ny ZIP amin'ny fametrahana amin'ny alalàn'ny fanarenana ny LG Optimus G2 Launcher vaovao miaraka amin'ny asany Knock Knock.
CloudMagic, mpanjifa mailaka maro ho an'ny Android sy iOS
CloudMagic dia manolotra antsika ny fahafaha-manao, amin'ny fampiharana iray fotsiny, hifehezana ny kaonty mailaka rehetra.
Fampiharana tsy mampino ho an'ny Android, anio Draw2Dial
Drawn2Dial dia manolotra antsika fomba hafa hiantsoana amin'ny alàlan'ny antso haingana. Iray amin'ireo fampiharana vaovao izay tokony ho fantatra
Sintomy ny Google Maps 7.4 apk manavao ny 8/11/13
Eto ianao manana ny kinova farany an'ny Google Maps 7.4 hatramin'ny 8 Novambra 2013 ho an'ny fampidinana mivantana ny APK.
Modding Android: Avadiho ho toy ny Windows Phone ny terminal anao
Nanomboka ity fizarana vaovao an'ny Modding Android ity izahay tamin'ny fanovana ny fisehoan'ny terminal anay ho an'ny an'ny Windows Phone.
Boky vaovao fitendry Android amin'ny Google Play misy tsiro amin'ny Android 4.4 KitKat
Ny fanavaozana vaovao ho an'ny Android Keyboard dia ahafahanao manoratra fehezanteny iray manontolo amin'ny fihetsika rehefa manoratra ianao fa tsy mila manandratra ny rantsan-tànanao.
Multiplayer tonga any Terraria
Terraria dia iray amin'ireo lalao manandanja indrindra misy amin'ny Android, ary raha ampidirina ao amin'ny Wi-Fi izao ny maody marobe, dia hihamaro ny fahafinaretana.
SickSky Launcher, mpandefa minimalista avy amin'ny mpamorona ny Zeam Launcher
SickSky Launcher avy amin'ny mpamorona ny Zeam Launcher dia manome antsika zavatra mitovy amin'ny minimalist Zeam Launcher saingy nifanaraka tamin'ny fotoana ankehitriny.
Ahoana ny fomba fampandehanana hafatra SMS ao amin'ny Hangouts
Raha misy antony, tsy te hanana safidy handray hafatra SMS ao amin'ny Hangouts ianao, dia hasehonay anao ny fomba hanafoanana azy io mora foana.
Fanavaozana ny Hangouts farany, fampidinana mivantana APK
Fampidinana mivantana ny apk ny kinova Hangouts v2.0.122 vaovao misy ny fanitsiana bibikely ao amin'ireo fiasa vaovao tafiditra toy ny SMS.
Fampihomehezana mampihomehy ho an'ny Android, LOL Funny Clips
LOL Funny Clips dia rindranasa miaraka amina interface tsara amin'ny fomba Holo izay manolotra fidirana mivantana amin'ireo atiny mahatsikaiky rehetra ao amin'ny fantsona You.
Miseho ao amin'ny Google Play ny fampiharana Google Voice Synthesis
Iray amin'ny tanjon'i Google ny hitondrana ny ankamaroan'ny rindran-damina Android amin'ny Google Play, toy ny Speech Synthesis na ny keyboard.
Google Opinion Rewards, mahazoa credit handany ao amin'ny Play Store
Miaraka amin'ny valisoa google Opinion Rewards ianao dia afaka manangona crédit handany amin'ny magazay fampiharana Android Google Play Store.
Boky maimaim-poana isan-kerinandro miaraka amin'ny Free-eBooks
Boky maimaim-poana ho an'ny Android dia manolotra antsika ny fahafaha-misintona boky elektronika dimy maimaim-poana isam-bolana.
Haneho ny sarin'ny piraofilinao Google+ i Google amin'ireo olona mifandray aminao izay miantso anao
Ny sarinao amin'ny piraofilinao Google+ dia hampiasaina hamantarana ireo nomeraon-telefaona rehefa miantso anao izy ireo amin'ny volana voalohany amin'ny 2014 miaraka amin'ny Android 4.4.
Sintomy ny boky fampianarana feno ho an'ny terminal Google
Eto izahay dia mitondra anao ireo boky fampianarana feno ho an'ny terminal Nexus rehetra sy ny torolàlana fanombohana haingana Android 4.4 Kit Kat maimaim-poana tanteraka.
Fampiharana Android mahatalanjona: SoundSeeder anio
SoundSeeder dia iray amin'ireo fampiharana tsy mampino ho an'ny Android, izay toa tsy mampino fa afaka tanteraka izy ireo.
Miaraka amin'ny Galaxy Lock Screen dia hananantsika ny fampiasa rehetra an'ny fampiharana Samsung manokana ho an'ny Android 4.0 na ny terminal avo kokoa
Ny sary rehetra na ny Wallpaper an'ny Android 4.4 Kit Kat sy ny Nexus 5 dia alaina mivantana amin'ny rakitra ZIP voafintina tokana.
Sintomy ny Play Store 4.4.22, apk fanavaozana farany
Fampidinana mivantana ny kinova farany an'ny Play Store 4.4.22 amin'ny endrika APK hametrahana amin'ny Android 4.0 na kinova ambonimbony.
Sintomy ny kitendry Nexus 5 vaovao sy Android 4.4 Kit Kat
Amin'ny alàlan'ny fangatahana malaza, eto no hitondrako anao ny klavie vaovao an'ny Nexus 5 sy Android 4.4 Kit Kat. Amin'ny fisintomana mivantana sy ny endrika APK.
Android 4.4 KitKat: ny fampidirana SMS vaovao
Ao amin'ny Android 4.4 KitKat dia azontsika atao ny mampiasa ny rindranasa SMS tadiavinay izay tena lehibe handefasana sy handraisana SMS.
Sintomy ny fonosana Google Apps Nexus 5 vaovao: Galerie Vaovao, Calculator Ary fampiharana maro hafa
Eto aho hitondra anao ireo rindranasa sisa tavela amin'ny Google Apps vaovao ho an'ny Android 4.4 sy ny Nexus 5 vaovao, izay natokana ho an'ny Android rehetra.
Misintona ny Google Apps vaovao manarona ny Nexus 5: Email, Gmail ary Google Kalandrie
Eto aho mitondra anao ny Google Apps vaovao toy ny Gmail, Email ary Google Kalandrie nohavaozina amin'ny kinova farany ary nalaina mivantana avy amin'ny Android 4.4.
Misintona kinova vaovao an'ny Maps & Street View APK
Eto ianao manana ny fonony APK & Street View APK roa an'ny sary farany an'ny Nexus 5 sy Android 4.4 Kit Kat.
Sintomy mivantana amin'ny APK ilay Android 4.4 Kit Kat Launcher vaovao
Ny iray amin'ireo zavatra tsara momba ny rafitra fiasa Android dia raha vantany vao misy kinova vaovao ...
Ilay mpandefa launcher mahavariana sy namboarina dia ao amin'ny beta ampahibemaso
Themer dia mpandefa launcher izay miavaka amin'ny fahaizany manokana, manana lohahevitra an-jatony hanavahana ny terminal misy antsika amin'ny hafa.
Fampiharana mahavariana ho an'ny Android. Androany Locker Master
Androany amin'ny Incredible Applications ho an'ny Android dia manolotra Locker Master aho, fanoloana LockScreen izay hanova ny fomba hanokafanao Android.
True Launcher, mpandefa tsotra sy tena miasa
True Launcher dia mpandefa fampiharana maimaimpoana maimaimpoana ho an'ny Android izay manome anay hazavana sy famandrihana faran'izay betsaka amin'ireo fampiharana napetraka.
Ny Facebook Messenger vaovao dia mahazo endrika vaovao sy endrika vaovao [Download APK]
Ny Facebook Messenger vaovao dia azo jerena miaraka amina endrika endrika vaovao sy endrika vaovao. Azonao atao ny misintona ny APK eto eto amin'ny Androidsis.
Google Apps 12 nohavaozina omaly
Ity Android 4.4 KitKat efa ho avy ity dia zavatra iray hita amin'ny tontolo iainana, bebe kokoa taorian'ny fahitana ny lisitr'ireo fampiharana Google nohavaozina
SuperNote, Asus manamarika ny fampiharana ho an'ny Android rehetra
SuperNote dia ny fampiharana naoty Asus Padfone manokana, fampiharana ahafahantsika mandray naoty misy safidy maro hafa noho ny fampiharana mitovy
Misintona kinova vaovao an'ny Google+ APK
Eto ianao dia manana ny APK hisintona mivantana avy amin'ilay kinova google + vaovao izay misy ny fiasan'ny Sarimihetsika Mahagaga.
Ataovy miseho ao amin'ilay rohy ny sary famantarana ny tranonkalanao rehefa alefanao amin'ny alàlan'ny WhatsApp
Miaraka amin'ny fanavaozana WhatsApp vaovao, azo atao izay novakianao tamin'ny lohateny. Ahoana? Tsotra be: mampiasa ny kaody izay Facebook ...
Horonan-tsary mitsingevana ao amin'ny You Tube miaraka amin'ny fampiharana Viral maimaim-poana
Viral dia fampiharana maimaimpoana ho an'ny Android izay hanananay fiasa vaovao hankafizantsika ny horonantsary YouTube.
Rockstar dia mandefa iFruit ho an'ny GTA V amin'ny Android hikarakarana ny biby fiompy sy bebe kokoa
Rockstart Games dia mandefa iFruit ho an'ny Android manolotra ny fahafaha-manova ny fiara, mamorona sy mividy takelaka ary mikarakara ny biby fiompinay.
BBM ho an'ny Android, ny fomba fampiasana mombamomba roa samihafa amin'ny terminal iray ihany
Eto ianao dia manana rindranasa noforonin'ireo mpandrindra XDA ahafahantsika mifehy ny mombamomba BlackBerry roa ho an'ny BBM ho an'ny Android.
Ahoana ny fametrahana BBM ho an'ny Android amin'ny Android kinova 2.3 sy Cyanogenmod 7
Fampianarana iray isaky ny dingana hametrahana BBM ho an'ny Android 2.3 sy ireo terminal tsy misy mpanohana
Sintomy ny APK kinova farany avy amin'ny Play Store miaraka amin'ny menio sisiny vaovao
Fampidinana sy fomba fametrahana ny apk kinova farany avy amin'ny Play Store 4.4.21
Sintomy ny FlashPlayer ho an'ny terminal ARMv6
Sintomy ary apetraho FlashPlayer ho an'ny terminal miaraka amina processeur ARMv6
Sintomy Dead Trigger 2 IZAO MAIMAIMPOANA !! Lalao BRUTAL | Halloween Manokana
Azonao atao izao ny misintona an'ity hetsika hetsika sy horohoro 3d lehibe ity toy ny Dead Triger 2 maimaim-poana.
Fampiharana Android mahatalanjona: Smart LockScreen Cover ho an'ny Android
Ny Cover dia tonga amin'ny Android amin'ny alàlan'ny fanasana hanova ny efijery hidin-trano / hamaha ny terminal Android anay.
Nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny fampiharana ny Playstation 4 Android sy iOS i Sony
Ho an'ny volana Novambra ho avy izao ny fampiharana ofisialy ny PlayStation 13 ho an'ny Android dia hapetraka amin'ny faha-22 ho an'i Amerika Avaratra sy ho an'ny faha-4 any Eropa.
Sintomy ny zava-maniry VS Zombies 2 Momba ny ora IZAO maimaim-poana !! Halloween Manokana
Ny fampidinana an'ity lalao zavakanto Elecronic mahafinaritra Plants VS zombies 2 ity dia momba ny fotoana dia azo alaina any Espana sy any amin'ny firenena sisa.
iSense mpilalao mozika 3D fomba Apple
iSense dia mpilalao mozika ho an'ny Android izay manolotra antsika interface iray tena mitovy amin'ny an'ny fitaovana Apple toa ny iPhone na iPad.
BBM ho an'ny Android farany fanavaozana APK
Eto aho avelako mivantana ny APK an'ny BBM ho an'ny Android amin'ny fametrahana azy ao amin'ny terminal Android izay manana olana amin'ny fisintomana azy amin'ny Play Store.
Fampiharana Android mahatalanjona: Fampandrenesana ny Screen NiLS Lock
NiLS dia Widget ho an'ny efijery fanidiana hidiran'ny terminal Android, iray amin'ireo fampiharana tsy mampino sy maimaim-poana tanteraka.
Mitadiava tambajotra WiFi maimaim-poana na aiza na aiza miaraka amin'ny Free Zone
Free Zone Free WiFi Scanner dia fitaovana iray manamora ny fitadiavana ireo faritra fandrakofana WiFi maimaimpoana ary mifandray amin'izy ireo ho azy.
Bara fampandrenesana maharitra an'i BBM ao amin'ny Android
Raha tsy manana fampandrenesana maharitra BBM ao amin'ny Android ianao, dia mety hihemotra na tsy ho tonga akory ny hafatrao.
BBM apk fampidinana mivantana ho an'ny Android
Eto ianao manana ny apk BBM tany am-boalohany ho an'ny Android ho an'ireo rehetra izay, na dia manana terminal izay mahafeno ny fepetra takiana aza dia tsy afaka misintona izany amin'ny Play Store
BBM ho an'ny Android sy iOS: Ahoana ny fomba hanampiana fifandraisana vaovao
Tutorial video an-dàlam-pandrosoana hanampiana fifandraisana vaovao ao amin'ny BBM ho an'ny Android sy iOS.
Sintomy ary apetraho ny tsimbadika farany an'ny Play Store miaraka amin'ny fitetezam-paritra
Efa ananantsika ny apk ny kinova farany an'ny Play Store 4.4.21 ho an'ny fametrahana mivantana.
Sintomy ny Xperia Z Launcher tany am-boalohany
Advanced Xperia Launcher no trano fonenan'i Sony Xperia Z, ary azonao atao ny mametraka azy io tsy misy fizotrany manahirana sarotra, misaotra mpikambana ...
BBM ho an'ny Android sy iOS izao no azo sintonina
Izahay dia efa afaka misintona ny fampiharana andrasana indrindra tato anatin'ny taona vitsivitsy, BBM ho an'ny Android sy iOS.
Advanced Xperia Launcher dia rindrambaiko ampiasain'ny kinova Sony tany am-boalohany ary natao ho an'ny fametrahana amin'ny terminal Android hafa.
Fampiharana mahavariana ho an'ny Android: Mifantoha fampiharana fakantsary mahatalanjona
Ny fakan-tsary mifantoka dia iray amin'ireo fampiharana tsy mampino indrindra ho an'ny Android izay mety ho hitantsika dieny izao.
Nasiana apk BBM vaovao ho an'ny Android ao amin'ny forum XDA Developers
Nisy apk BBM vaovao ho an'ny Android vao tafaporitsaka tao amin'ny forum XDA Developers, izay tsy kinova ofisialin'ny BBM ary tsy mety aminao.
Google Play Music dia nohavaozina miaraka amin'ny fifangaroan'ny "Ho tsara vintana aho" amin'ny radio
Google Play Music dia mihatsara isaky ny tsimbadika vaovao, amin'ity safidy ity dia mitondra safidy hanakorontanana tampoka ny tantaran'ny fananahana.
Beta vaovao an'ny SwiftKey izay ahafahanao manova ny habeny sy ny toeran'ny fitendry
Swiftkey dia manolotra beta vaovao izay ahafahanao manova ny habeny sy ny toeran'ny fitendry araka ny itiavanao azy, manolotra fanaingoana tsy manam-paharoa.
Lewa Home, ilay Roms Lewa an'ny mpandefa azy ho an'ny Android rehetra
Lewa Home no Roms Lewa an'ny mpandefa azy manokana ary manana endrika ao amin'ny Apple iOS madio indrindra.
Whatsapp ho an'ny PC ho avy tsy ho ela
Tena azo inoana fa ny fanararaotana ny asan'ny kinova WhatsApp amin'ny HTML5 izay havoaka ho an'ny Firefox OS, dia hifanaraka tanteraka amin'ny PC
Ny Play Store dia havaozina amin'ny Android 4.4 Kit Kat
Toy ny mahazatra, miaraka amin'ny fahatongavan'ny android 4.4 Kit Kat dia hisy fanavaozana vaovao ihany koa avy amin'ny Google Play Store.
BBM ho an'ny Android: iza no miandry tsy ampoizina!
Ny fiandrasana miaraka amin'ny fampahalalana kely momba ny fanombohana BBM ho an'ny Android sy iOS dia mahafaty ny fiheveran'ireo mpampiasa ny rafi-pitantanana finday.
Lenovo Super Camera, fampiharana fakantsary manaitra ho an'ny Android
Fampiharana fakan-tsary mahavariana ho an'ny terminal Android, Lenovo Super Camera azo alaina mivantana amin'ny APK manomboka eto.
Fampiharana 10 hahasalama sy hijanonana milahatra
Android dia manana rindranasa lehibe hahazoana endrika, afaka manala na dia lanjany fanampiny vitsivitsy aza ary manana endrika mitandrina kokoa.
Fampiharana tsy mampino ho an'ny Android: Androany Nubefone, antso mora be
Nubefone dia serivisy vaovao ahafahantsika miantso feo am-peo mahazatra amin'ny vidiny mifaninana ary miaraka amin'ny fanomezana dimy euro.
Sintomy ny Wallpapers am-boalohany an'ny Samsung Galaxy Note 3
Fampidinana mivantana sy maimaim-poana ireo sary miavaka na Wallpaper an'ny Samsung Galaxy Note 3
Android 4.4 KitKat dia hanana fampiharana mailaka ho an'ny SMS
Amin'ny Android 4.4 KitKat dia azonao atao ny misafidy iray amin'ireo rindranasan'ny SMS ananantsika mba handefasana sy handraisana ireo karazana hafatra rehetra ireo.
Fampiharana mahasoa ho an'ny Android: Flashify
Flashify dia iray amin'ireo fampiharana ho an'ny Android izay tokony ho ao amin'ny lisitry ny Apps ilaina ho an'ny Android.
Apetraho amin'ny rindrambaiko Android hafa ny fakantsary fakantsary Samsung Galaxy Note 3
Sintomy ny fampiharana fakantsary teratany an'ny Samsung Galaxy Note 3 amin'ny endrika apk ho an'ny fametrahana amin'ny terminal Android hafa.
Fampiharana mahasoa ho an'ny Android: Super Backup: SMS & Contacts
Manomboka ity fizarana vaovao amin'ny Useful Apps ho an'ny Android ity izahay miaraka amina fampiharana tena ilaina amin'ny famerenana sy famerenana amin'ny laoniny.
Fampiharana Android mahatalanjona: Andro izao Wallpaper Changer
Ny Wallpaper Changer dia azo raisina ho iray amin'ireo fampiharana tsy mampino ho an'ny Android noho ny fahatsorany sy ny fiasany.
Rockstar Games dia mamoaka ny torolàlana ofisialy Grand Theft Auto V ao amin'ny Google Play
Ny boky ofisialy ho an'ny Grand Theft Auto V dia tonga amin'ny Android avy amin'ny Rockstar Games miaraka amin'ny atiny mavitrika sy karazana fampahalalana rehetra.
Sintomy ny fampiharana Samsung Galaxy Note 2 Gallery
Sintomy ary apetraho ny fampiharana Samsung Galaxy Note Gallery
Microsoft manavao ny fampiharana Outlook.com ho an'ny Android miaraka amin'ny fanatsarana lehibe
Outlook.com ho an'ny Android dia nohavaozina miaraka amin'ny fanatsarana lehibe toy ny karoka hafatra na fanatsarana ny fampifanarahana amin'ny fika kely samihafa.
Fampiharana Android mahatalanjona: Mpandrindra torrent sy misintona anio
Torrent & Download Manager dia mpitantana torrent download manaitra ho an'ny Android ary iray amin'ireo rindranasa izay hilaina amintsika.
Tonga ny kinova Pro an'ny uTorrent malaza ho an'ny Android
Rehefa afaka herintaona mahery miaraka amin'ny kinova beta dia hita ao amin'ny Google Play ny kinova Pro an'ny uTorrent ho an'ny Android, ka manjary manjavona ilay dokambarotra.
Smart Launcher mpandefa hafa tena maivana
Smart Launcher dia mpandefa iray tena hafa tanteraka amin'ny mahazatra antsika amin'ny Android, loharanom-pahalalana miasa sy manatsara ny faran'izay betsaka.
Fungipedia, fampiharana ho an'ireo tia mycology [REVIEW]
Mpitia holatra sy holatra ve ianao? Raha izany dia azo antoka fa hahaliana anao ity fampiharana ity. Handeha aho anio…
Ahoana ny fametrahana fakan-tsary Xperia amin'ny terminal Android hafa
Xperia Camera dia seranan-tsambo an'ny fampiharana Sony tany am-boalohany sy ny terminal Xperia misy azy, namboarina ho an'ny modely Android hafa.
Maimaimpoana izao i Tapatalk ary ny kinova HD antsoina hoe "Pro"
Tamin'ity taona ity i Tapatalk dia nanova ny maodely misy azy miaraka amin'ireo kinova samihafa izay mandrafitra ny fampiharana forum malaza, ary farany manana roa.
Fampiharana Android mahatalanjona: Ankehitriny Big Skin launcher UCCW
Big Launcher UCCW Skin dia hamadika ny Launcher Nova Launcher, Apex na Holo Launcher ho mpandefa iray hita na dia amin'ny tara-pahazavana mamiratra aza.
Fampiharana mahatalanjona ho an'ny Android: androany scheduler Whatsapp
WhatsApp scheduler dia rindranasa iray izay hanampy antsika hanafaingana ny hafatra amin'ny WhatsApp ary handefa azy ireo amin'ny fifandraisana iray na maromaro amin'ny fotoana sy andro voatondro.
Sintomy ny fakantsary Motorola X apk hametrahana amin'ny Android rehetra
Fampidinana mivantana ny rindrambaiko fakantsary Motorola X apk, ho an'ny terminal Android rehetra.
Fampiharana Android mahatalanjona: Androany Gallery Plus - Afeno ny sary
Gallery Plus - Afeno ny sary dia iray amin'ireo fampiharana tsy mampino ho an'ny Android izay manome antsika fahafaha-mitantana betsaka ny galeriantsika.
Go Launcher EX ary Go Locker olom-pantatra taloha efa navaozina tanteraka
Androany aho te hampahafantatra anao ny Go Launcher EX sy Go Locker, antitra roa fantatry ny rehetra fa mipoitra indray miaraka amin'ny endrika vaovao sy fiasa vaovao.
File Explorer dia mpikaroka rakitra vaovao izay nahazo ny fampidirana azy ao amin'ny sokajy Amazing Apps for Android.
Google mandrara ny fampandrenesana ny fanentanana amin'ny doka
Amin'ity herinandro ity dia manan-kery ireo fepetra vaovao momba ny mpamorona Google Play izay mandrara ny fampandrenesana fanindriana amin'ny doka amin'ny fampiharana.
Equalizer 10-tarika maimaimpoana ho an'ny Android amin'ny endrika apk
Eto aho mitondra anao Equalizer 10 Band mahery vaika maimaimpoana ho an'ny Android. Manana ny fangatahana fampidinana mivantana amin'ny endrika apk izahay
Fampiharana Android mahatalanjona: SuperBeam Androany
SuperBeam dia iray amin'ireo fampiharana izay tsy afaka mihoatra ny voasokajy ao amin'ny sehatry ny fampiharana tsy mampino ho an'ny Android.
Ahoana ny fametrahana ny efijery fanidiana Samsung Galaxy S4 amin'ny terminal Android 4.0+
Ny Galaxy S4 Lockscreen dia mamela antsika hametraka ny rafitra hidin-trano Samsung Galaxy S4.0 amin'ny Android 4 na avo kokoa. Miaraka amin'ny App maimaim-poana.
Fampivoarana Facebook amin'ny Android mamela ny fanitsiana hafatra
Nahazo fanavaozam-baovao vaovao hafa ny Facebook, saingy mbola lavitra ny lalana tokony hahatratrarana an'io fampiharana tadiavin'ny maro ho an'ny finday io.
Fampandrenesana iNoty, iOS7
Teo aloha dia niresaka momba ny fomba fisehoan'ny iOS7 amin'ny android-nay aho, voalohany amin'ny Control Center sy Screen Locker (samy nohavaozina ...
Fampiharana Android mahatalanjona: Androany CoolAR Mix
CoolAR Mix dia niditra tao amin'ny katalaoginay manokana momba ny Applications tsy mampino ho an'ny Android.
Sintomy maimaim-poana sy ara-dalàna tanteraka ny rindranasa karama
Mba hankalazana ny tsingerintaona voalohany fivarotana avy amin'ny Amazon App Store, Amazon Apps dia manome fampiharana enina karama mandritra ny 24 ora.
Ampio hametraka ny GPS amin'ny TopNTP
Ahoana ny fanatsarana ny sehatr'asa GPS an'ny Android anao hahazoana haingam-pandeha sy kalitaon'ny famantarana amin'ny TopNTP, fampiharana maimaim-poana tanteraka
Google dia manisy tondro mari-pahaizana amin'ny Hangouts for Android
Nohavaozina ny Hangouts amin'ny alàlan'ny fampidirana ny fiasa hahafahana mahita ny fisian'ny fifandraisana amin'ny Internet.
Fampiharana tsy mampino ho an'ny Android: Androany WhatsApp ivelan'ny Internet
WhatsApp offline dia rindranasa maimaimpoana maimaimpoana ho an'ny Android izay ahafahantsika mijanona mora foana ny fampandrenesana WhatsApp.
Ahoana ny fomba ahafahana mamela ny fikirana haingana amin'ny terminal Android rehetra
Quick Setting dia iray amin'ireo endri-javatra lehibe na fampiasa vaovao izay tonga tao aminay Jelly Bean.
Fanavaozana ny Twitter miaraka amin'ny fampandrenesana fanosehana ho an'ny atiny atolotra
Twitter dia mandray kinova vaovao miaraka amin'ny fampandrenesana fanindriana izay mampiseho ny atiny asongadin'ny fandaharam-potoanan'ny namanao manokana.
Ahoana ny fomba hanaovana ScreenCast amin'ny Android miaraka amin'ny Screen Recorder
SCR Screen Recorder dia mamela antsika hanao ScreenCast amin'ny Android, ao anatin'izany ny terminal misy an'i Tegra Chip
Fomba fitantanana mora foana ny atin'ny Android terminal anao
Moborobo dia mamela antsika hitantana amin'ny fomba tena tsotra ny atiny rehetra amin'ny Android, eny fa na ny rindranasan'ny rafitra aza.
Mitady rindranasa maimaimpoana maimaimpoana ho an'ny Android izahay nahita ity fampiharana fakantsary mahatalanjona ho an'ny Android ity.
Fifa 14 Ankehitriny amin'ny fisintomana / Famerenana / Fanadihadiana
Androany izahay mitondra anao Review momba ity lalao baolina kitra mahafinaritra ity toy ny Fifa 14
Sintomy ny fampiharana BBM ofisialy ho an'ny Android
Ny fampahalalana rehetra ilainao hahazoana ny fampidinana BBM ofisialy ho an'ny Android sy iOS.
Fampiharana Android mahatalanjona: Keyboard TouchPal X anio
TouchPal X Keyboard dia fitendry marani-tsaina maimaimpoana maimaimpoana ho an'ny Android izay manome antsika fahatsorana, fiasa ary haingam-pandeha.
Ny BBM ho an'ny Android dia nijanona nanerana an'izao tontolo izao (amin'izao fotoana izao)
Araka ny fanambarana ofisialy avy amin'ny BlackBerry, ny BBM andrasana ho an'ny Android sy BBM ho an'ny iOS dia tokony hiandry andro vitsivitsy farafaharatsiny.
Miandry ny kinova ofisialin'ny BBM for Android eto dia ny APK ofisialy
Fampidinana mivantana sy fomba fametrahana BBM ho an'ny Android amin'ny fampiasana APK ofisialy.
Mihetsika, ny fampiharana izay mirakitra ny hetsika ara-batana rehetra dia tonga amin'ny Android
Mamindra ny tolotra, tsy mila mividy kojakoja manokana, hahafahana mirakitra ny hetsika ara-batana sy isan'andro ataonao amin'ny terminal Android anao
Ny Live Wallpaper tsara indrindra ho an'ny Android anao: Androany Gallery 3D Live Wallpaper
Fizarana vaovao amin'ny androidsis izay hatolotray anao ny tsara indrindra Live wallpaper tsara indrindra ho an'ny terminal anao.
Fampiharana Android mahatalanjona: Androany Smart Call Acept
Amin'ity fizarana vaovao misy Applications tsy mampino ho an'ny Android ity dia manolotra Smart Caller Accept izahay.
Every Home (Beta), mpandefa izay mifanaraka amin'ny zavatra ilainao
Ny zava-drehetra Home (Beta) dia mpandefa maimaim-poana ho an'ny Android izay mifanaraka amin'ny filan'ny fotoana tsirairay.
Amidio ny sarinao manokana miaraka amin'ny Foap for Android
Midina amin'ny Android ny rindrambaiko, fampiharana ara-tsosialy mamela ny fivarotana sy fividianana sary 10 dolara, safidy tsara ahazoana vola fanampiny isam-bolana.
Ahoana ny fomba hampiasana kaonty WhatsApp roa amin'ny terminal iray (2 na +)
Fampianarana tsotra hahafahanao mampiasa kaonty WhatsApp roa na maromaro avy amin'ny terminal Android iray.
Amin'ity fizarana vaovao vaovao mampino ho an'ny Android ity dia manolotra Call Popout izahay, fampiharana maimaim-poana hitantanana antso amin'ny fomba Chat Heads.
Aldiko Book Reader Premium nohavaozina ho v.3.0 miaraka amin'ny fanavaozana ny interface interface
Ny mpamaky malaza indrindra amin'ny Android, Aldiko Book Reader Premium, dia mandray fanavaozana lehibe izay manavao tanteraka ny endriny hita maso.
Ahoana ny fametrahana WhatsApp amin'ny fitaovana roa miaraka
Fampianarana an-dàlana iray hametrahana WhatsApp amin'ny terminal Androis roa miaraka.
Sintomy ny hoditra UCCW
Fampidinana maimaimpoana ny hoditra UCCW sy ny fomba mety hampiharana azy ireo amin'ny birao Android anao miaraka amina fampianarana an-dàlana iray.
YouTube dia hanisy playback ivelan'ny daholobe amin'ny rindranasa finday amin'ny volana novambra
Fampisehoana mahaliana iray izay ampian'i YouTube amin'ny rindranasa finday ny fahafahany mitsitsy horonan-tsary eo an-toerana hilalaovana azy ireo ivelan'ny toerana.
Fampiharana Android mahatalanjona ankehitriny: AutomateIt-Automate your Droid
Ao anatin'ny sehatry ny Applications tsy mampino ho an'ny Android androany dia manolotra fampiharana maimaimpoana ho anao izahay izay hahafahanay mandeha ho azy ny terminal.
Kitendry Xperia Honami, misintona ary mametraka ho an'ny Roms Deodexed
Fomba fampidinana sy fametrahana ny Xperia Honami Keyboard, ny fitendry voalohany an'ny terminal Sony farany.
Android Kit Kat 3D Wallpaper maimaim-poana amin'ny Play Store
Live Wallpaper na sary an-tsary mihetsika ho an'ny Android miorina amin'ny Android Kit Kat, maimaim-poana sy 3D tanteraka.
Sintomy ny mpandefa sy ny fampiharana an'ny Samsung Galaxy Note 3
Fampianarana iray isaky ny dingana hahitana ny fijerin'ny Samsung Galaxy Note 3 amin'ny terminal misy Android 4.2 na avo kokoa.
UCCW Skin: Tiles 4.0 avy amin'i dadilydoo fampianarana tsikelikely
Fampianarana tsikelikely hametrahana hoditra na lohahevitra miorina amin'ny UCCW, amin'ny teny espaniola tanteraka ary miaraka amin'ireo rakitra ilaina rehetra.
Fampianarana handefasana sy hametrahana ilay Samsung Galaxy S4 Launcher tany am-boalohany miaraka amin'ireo Widgets rehetra sy ireo fiasa manokana ao amin'ny Android rehetra.
UCCW na fantatra amin'ny anarana hoe Ultimate Custom Widget dia ahafahantsika mamorona Widgets an'ny Android ho an'ny Android.
Ny fifandraisana hafahafa asehon'ny Twitter amin'ireo mpamorona mpanjifan'ny Twitter dia tena miavaka toa ny Falcon Pro sy ny Tweet Lanes.
Manorata teny 80 isa-minitra amin'ny kitendry Dryft mahavariana avy amin'ny mpiara-manorina an'i Swype
Mila fitaovana manokana ny dryft mba hahafahany ampiasaina amin'ny takelaka, fa hahafahana manoratra hatramin'ny 80 teny isa-minitra.
Nohavaozina Solid Explorer miaraka amina tontonana fanamarihana nohatsaraina, fanohanana Android 4.3 ary maro hafa
Version 1.5 ho an'ny Solid Explorer, izay manolotra fanampiana ho an'ny Android 4.3 ary mamela anao hampiasa mpanjifa toa ny MediaFire ao anaty rahona.
Fampiharana tsy mampino ho an'ny Android: Sherpa, mpanampy amin'ny feo amin'ny fiteny espaniola tanteraka
Sherpa dia mpanampy am-peo maimaim-poana ho an'ny Android amin'ny fomban'ny Siri madio indrindra nefa manana asa maro hafa ary amin'ny Espaniôla tanteraka.
Ahoana ny fihainoana sy ny fahitana ireo fampandrenesanao miandry amin'ny alàlan'ny Bluetooth an'ny fiara
Botifier dia mamela antsika hahazo fampandrenesana avy amin'ny Android amin'ny alàlan'ny lahatsoratra TTS mankany amin'ny lahateny ary amin'ny efijery amin'ny radio fiaran'ny fiara ho toy ny lahatsoratra.
Google Drive dia serivisy fitehirizana rahona izay misongadina amin'ny famoronana takelaka ary nohatsaraina tamin'ity kinova vaovao ity.
Top 5 mpitantana rakitra maimaim-poana ho an'ny Android
Manadihady ny mpitantana rakitra 5 tsara indrindra amin'ny Google Play izahay.
Sarotra ny misafidy izay tsara indrindra, fa ireto mpilalao mozika dimy ireto: PowerAmp, Winamp, VLC, Neutron Music Player, ary N7 Player no tsara indrindra any.
Ahoana ny fomba fampidinana ireo horonantsary YouTube avy amin'ny Android anao
You Tube Downloader dia mod izay ampiharina amin'ny fampiharana Google tany am-boalohany izay manome antsika ny fahafaha misintona atiny avy amin'ny fantsona.
Simplenote, ny serivisy fanamarihana an-tsoratra amin'ny cross-platform dia tonga amin'ny Android
Tonga tao amin'ny Android ihany i SimpleNote, naneho ny tenany ho toy ny rindranasan-tsoratra izay hifaninana mivantana amin'i Google Keep na Evernote.
Ireo fampiharana 5 tsara indrindra hahitanao asa
Nifantina ireo rindranasa 5 tsara indrindra hahitanay asa any Espana izahay. Amin'ny alàlan'ny tsindry tsotra iray dia handefa ny fandaharam-pianarantsika ho an'izay rehetra tadiavinay.
Miverina any an-tsekoly, fampiharana manokana ho an'ny Android
Fampiharana maimaim-poana hita ao amin'ny Android Play Store izay hanampy antsika hiverina any an-tsekoly.
Sintomy ny APK vaovao an'ny Google Play Music miaraka amina karazana mozika ho an'ny Radio sy maro hafa
Fampivoarana vaovao an'ny Google Play Music miaraka amin'ny karazana Radio sy maro hafa, toy ny fanatsarana ny lisitry ny fisintomana hira izay manana "pin".
Ahoana ny fakana tahaka ny Samsung Air Gestures amin'ny terminal misy ny Hovering Controll
Ny fanaraha-maso mihodina dia mamela antsika hampiasa ny sensor akaiky ny fitaovantsika hanahaka ny Samsung Air Gestures ary tsy mila mikasika ny efijery.
Ahoana ny fametrahana apetraka tsy mifanaraka amin'ny fitaovantsika
Fampianarana hahafahana mivezivezy amin'ny fetra Play Store ary afaka mametraka rindranasa tsy tohanana na miditra amin'ireo fivarotana amin'ny faritra hafa.
Ahoana ny fomba famongorana ny terminal Android anao amin'ny Framaroot
Fampianarana azo ampiharina amin'ny fampidinana sy fampiasana Framaroot hamongorana ny Android
Solony amin'ny fivarotana fampiharana Android Play Store
Lisitry ny safidy hafa amin'ny fivarotana fampiharana Android Play Store, ao anatin'izany ny fomba fametrahana sy rohy hampidinana azy ireo.
Ahoana ny fomba hijerena fahitalavitra mivantana amin'ny Android Smartphone na Tablet-nao
Ny DTT Directo TV dia mamela antsika hijery fahitalavitra mivantana avy amin'ny fitaovantsika Android maimaim-poana.
Miui Deskclock ho an'ny Android misy Android 4.0 na avo kokoa
Miui Deskclock no famantaranandro an'ny ROM an'ny ekipa fampandrosoana Miui, eto dia atolotray anao ny apk manan-kery ho an'ny Android 4.0 na +
Sintomy ny Google Apps ny dikanteny rehetra, (Fampiharana teratany Google)
Fampidinana mivantana ny kinova google apps rehetra ary koa ny fomba fametrahana avy amin'ny fanovana nohavaozina.
Fampandrenesana SMS toy ny Ninja Ninja, lohateny Chat Heads
Ninja SMS dia manolotra rafitra fampandrenesana ho antsika izay mitovy amin'ny Chat Heads izay malaza amin'ny Facebook Home.
Ireo mpamaky fahana RSS tsara indrindra ho an'ny Android
Ireo mpamaky RSS tsara indrindra ho an'ny Android amin'ny vanim-potoana Google Reader.
AntTek, mpikaroka rakitra faka mampihetsi-po amin'ny fampiasa maro
AntTek dia mpikaroka rakitra Root maimaim-poana, azo alaina mivantana avy eto na avy amin'ny XDA Developers.
Sidebar plus, multitasking mahatalanjona ho an'ny Android terminal
Sidebar plus dia rindranasa maimaim-poana izay azontsika sintonina sy apetraka mivantana amin'ny terminal Android misy ny andiany 2.2 na avo kokoa.
SAO Launcher, trano iray hafa soloina eo akaiky eo hatrany
SAO Launcher dia mpandefa na Home izay afaka atambatra amin'ny mpandefa ankafizinao izay miasa ao aoriana ary hanome azy fiasa bebe kokoa.
Fanatsarana ny resaka ao amin'ny kinova Twitter ho an'ny Android vaovao
Ny fampiharana Twitter ofisialy ho an'ny Android dia mahazo fanavaozana vaovao miaraka amin'ny fanatsarana ny resaka sy ny fanatsarana ny modely ambany.
Trick Android (IV): Ireo Widget an'ny terminal anay
Ireo zavatra rehetra hitantsika amin'ny latabatra telefaona ireo toy ny famataran'ora, fampahalalana momba ny toetr'andro sns. Manazava ny momba azy rehetra izahay.
Duolingo dia nohavaozina tamin'ny kinova 1.2 miaraka amin'ny fanohanana ivelan'ny Internet
Duolingo dia mety ho mpiara-dia amin'ny dia sy fialan-tsasatra tonga lafatra hianaranao ny teny anglisy amin'ny fomba mahafinaritra
Minuum, fitendry hafa ho an'ny Android-nao
Minuum dia mitondra fomba vaovao hampiasa keyboard amin'ny Android ary ianareo izay mitady safidy hafa amin'ny kitendry Android efa misy, dia safidio.
Sintomy ny kinova vaovao 5.0 an'ny Youtube miaraka amina multitasking, maody vaovao sy interface vaovao
YouTube dia miseho miaraka amina kinova vaovao, 5.0, miaraka amin'ny maody multitasking ao anatin'ny fampiharana, maody ho an'ny takelaka ho an'ny takelaka ary interface vaovao mifototra amin'ny karatra.
Ara-potoana dia iray amin'ireo famantaranandro fanairana tsara indrindra amin'ny Android
Raha mila famantaranandro fanairana vaovao ho an'ny Android ianao dia manolotra anao ny zavatra rehetra ilainao amin'ny foto-pisainana tsara sy ny fihetsika mifototra amin'ny fihetsika.
Ny AirCast dia mamela anao hilalao horonantsary avy amin'ny Gallery, Dropbox ary Drive miaraka amin'ny ChromeCast
Avy amin'ny iray amin'ireo mpamorona mahomby indrindra amin'ny Android, Koush, dia tonga AirCast, hilalao horonan-tsary avy amin'ny galeriana, Dropbox na Drive mankany amin'ny fahitalavitrao.
Kinova Google Maps vaovao miaraka amina tranobe 3D mihodinkodina
Nahazo fanavaozana tsara ny Google Maps tamin'ity fahavaratra ity, izay nankasitrahana na tsy nankafizin'ny vondrom-piarahamonina Android. Androany mitondra fanavaozana vaovao.
Ahoana no hanafenana ny fotoana fifandraisana farany ao amin'ny WhatsApp?: WhatsHide Farany
Ny fotoana farany fampifandraisana WhatsApp dia mampahafantatra antsika ny ora farany nifandraisan'ny mpampiasa tamin'ity serivisy ity. Mba hisorohana azy: WhatsHide Last Seen
CheapCast dia mamadika ny fitaovana Android rehetra ho lasa Chromecast
CheapCast dia mamela anao hahita amin'ny fahitalavitra na takelaka misy anao amin'ny fampiasana fitaovana Android izay tadiavinao amin'ny fampiasana YouTube, NetFlix na Google Music.
Kinova vaovao an'ny Nova Launcher miaraka amin'ny fanatsarana voalohany
Iray amin'ireo mpandefa malaza indrindra ho an'ny Android, Nova Launcher, no nohavaozina ao anatin'izany ny fanatsarana toy ny style ho an'ny dock na ho an'ny badgets.
Google dia manolotra ny Android Device Manager hahita ny findainao very
Tsara lavitra noho ny tsy misy intsony, ary Google nanolotra ny serivisy Android Device Manager ao amin'ny Android, hikarohana sy hamafana angona avy amin'ny telefaoninay.
Ny Google Kalandrie dia mandrindra ny fampandrenesana eo anelanelan'ny fitaovana ihany
Ny kinova vaovao amin'ny Google Calendar dia manolotra fampifanarahana eo anelanelan'ny fitaovana noho ny serivisy Google vaovao amin'ny fampandrenesana fampandrenesana.
Ahoana ny fametrahana apetraka amin'ny Android (sy IV): Fanesorana marina
Torolàlana ho an'ny fanesorana marina ireo rindranasa ao amin'ny Android, fanesorana ireo tavela sisa tavela.
Google Play Games dia manana ny fampiharana azy hatramin'ny omaly
Fandrosoana mialoha manan-danja hamoronana sehatra lalao video amin'ny rafitra fiasa Android miaraka amin'ny rindranasa Google Play Games azo nanomboka omaly.
Ahoana ny fametrahana apetraka amin'ny Android (III): Afindra amin'ny karatra SD ny fampiharana
Torolàlana kely hahafantarana ny fomba famindrana ny fampiharana amin'ny karatra SD, izay tokony hafindra ary maninona.
Fanavaozana ny Evernote miaraka amin'ny fanatsarana lehibe
Ny fampiharana ofisialy Evernote dia nohavaozina miaraka amin'ny fanatsarana lehibe mikendry indrindra amin'ny famokarana manokana.
Snapchat, miaraka amin'ny sary sy horonantsary manimba tena, dia tonga lafatra amin'ity fahavaratra mafana ity
Amin'ny Snapchat dia afaka mandefa sary sy horonan-tsary manimba tena ianao amin'ny fotoana nofidinao fa tsia, tsy ny lohan'ny Inspecteur Gadget no namorona azy.
Ahoana ny fametrahana apetraka amin'ny Android (II): Fampidinana mivantana
Amin'ity torolàlana kely ity dia hanazava ny fomba fametrahana rindrambaiko Android alaina na maka tahaka ny fitaovana izahay.
ReKey dia mametaka ny fahalemen'ny Master Key ho an'ireo mpampiasa miorim-paka ao amin'ny tobiny
Izay tsy manana Google Edition na CyanogenMod terminal dia afaka mametraka ReKey hametahana ny fahalemen'ny Master Key.
Paper Artist, avy amin'ireo mpanamboatra ny Camera Camera, misy ao amin'ny Google Play
Ny Mpanakanto taratasy dia mamarana ny maha-exclusivité azy amin'ny fitaovana Samsung, ary hatramin'ny androany dia azo vidiana amin'ny Google Play.
Ny fanovana rehetra natao tamin'ny kinova Web an'ny Google Play
Fanavaozana ny kinova amin'ny tranokala Google Play, miaraka amin'ny hatsarana kanto hita maso ary fanafoanana ireo fiasa lehibe sasany.
Ahoana ny fametrahana apetraka amin'ny Android (I): Fivarotana fampiharana
Amin'ity torolàlana kely ity dia hanazava ny fomba fametrahana rindranasa amin'ny Android amin'ny fivarotana rindranasa izahay.
Ny fampiharana 5 fanabeazana tsara indrindra ho an'ny Android
Androany izahay mitondra anao ny lisitry ny fampiharana fanabeazana tsara indrindra ho an'ny Android, izay hahafahanay mianatra matematika na mianatra fiteny.
Ny fanatsarana rehetra nampiana ao amin'ny Google Maps vaovao
Fampisehoana vaovao ao amin'ny fanavaozana ny Google Maps vaovao toy ny trangam-pifamoivoizana sy ny tantaran'ny fikarohana tsara kokoa tafiditra ao amin'ilay fampiharana.
Fanaraha-maso lavitra ho an'ny fitaovana Android rehetra noho ny TeamViewer QuickSupport
Ny Teamviewer Quicksupport dia nanana ny maha-izy azy tamin'ny terminal Samsung marobe, satria afaka andro farany dia azo ampiasaina amin'ny fitaovana Android rehetra izy io.
Bokotra natokana ho an'ny sari-tany tsy an-tserasera nampiana ao amin'ny Google Maps ho valin'ny fitarainana
Noho ny fitarainan'ny mpampiasa sasany tato ho ato dia voatery nampihatra ny bokotra Google Maps i Google mba hamonjy ilay faritra eo an-toerana.
Chrome nohavaozina ho an'ny Android miaraka amin'ny fanohanan'ny efijery feno amin'ny takelaka
Fanatsarana vaovao roa tena lehibe ho an'ny Chrome toy ny fizahana tranonkala amin'ny efijery feno amin'ny takelaka sy ny fandikana ny pejy web.
Nanavao ny fampiharana Tumblr ho an'ny Android miaraka amin'ny fanatsarana lehibe
Ny fampiharana Android ofisialin'ny tambajotra bilaogy micro Tumblr dia nohavaozina miaraka amina interface vaovao sy fanatsarana maro hafa.
Facebook for Android dia novaina ho amin'ny andiany 3.4
Manomboka izao, ho an'ireo izay manana Android 2.3.7 na kinova ambany, azon'izy ireo atao ny mamindra ny fampiharana Facebook mankany amin'ny microSD, manangona toerana.
Fampiharana mandeha ho azy birao ilaina amin'ny Android
Fampiharana automatique birao ilaina dimy misy famaritana fohy sy fampiasana azy, samy manana ny mampiavaka azy izy ireo
Cheats 6 ho an'ny Nexus 4
Androany aho hanazava tetika vitsivitsy hanatsarana ny zavatra niainanao tamin'ny Nexus 4 ary hanararaotra ny zava-drehetra ...
Photo Gallery Fish Bowl, mpijery sary tsotra sy matanjaka
Ity mpijery sary matanjaka ity, Photo Gallery Fish Bowl, dia niaraka taminay nandritra ny fotoana elaela, lasa toetra mampiavaka ny Quickpic.
«Priyanka» dia mampiasa bibikely ao amin'ny WhatsApp hanovana ny anaran'ny vondrona misy anao sy ny mpifandray aminao
Priyanka dia hanova ny anaran'ny vondrona rehetra ary na ny mpifandray aminao aza, raha ampidirinao ao anaty lisitrao izy rehefa miseho ho rakitra ao anaty hafatra izy.
Fampiharana mahaliana indrindra amin'ny herinandro (IV)
Tapitra ny herinandro iray hafa ary fotoana mety izao hijerena ireo fampiharana mahaliana indrindra ao aminy, ny sasany ...
Ny fampiharana fakantsary an'ny fakan-tsary an'ny Samsung Galaxy dia nalefa tany amin'ny Galaxy S4
Avy amin'ny forum XDA Developers dia nahavita nandefa ny fakantsary fakantsary an'ny Samsung Galaxy Camera ho an'ny zokiny Galaxy S4 izy ireo.
Sony handefa izao tontolo izao ny Xperia, Lock and Telefaona finday lavitra
Sony dia nanambara ny fisian'ny herinandro vitsivitsy ho avy ny My Xperia, fampiharana ho an'ny fanidiana lavitra ny Xperia tamin'ny taona 2012 sy 2013.
Azo alaina ho an'ny Android ny fampiharana Mega ofisialy
Ny serivisy fitehirizana rahona Mega dia nanao fampiharana azo ampiasain'ny mpampiasa Android hitantanana ny kaontiny sy ny atiny.
Ny fonosana fakantsary Sony Honami ho an'ny Xperia Z, ZL ary Tablet Z
Mpanamboatra XDA iray no nandefa ny fakantsary fakantsary an'ny Sony Honami, ilay hain-tsarimihetsika vaovao andrasana an'ny orinasa Japoney, miaraka amin'ny 20MP ao anaty fakantsary.
Mamorona drafitra gorodona haingana sy mora amin'ny Android miaraka amin'ny Floor Plan Creator
Niasa an-taonany maro tao amin'ny studio maritrano aho ary indraindray dia niaraka tamin'ny mpanao maritrano tamin'ny ...
Miaraha miasa amin'i Google Maps amin'ny alàlan'ny Street View Trekker manaraka
Street View Trekker ao anaty kitaponao, lalana misy toerana tadidio vitsivitsy ary ny sary mandeha ho azy dia hikarakara ny fanomezana sary ao amin'ny Google Maps.
Fifandraisana voalohany amin'ny Android, voalamina ary izao dia mijery ny Google Play izahay ary mahita rindranasa an'arivony. Iza amin'ireo no hapetraka? manampy anao hisafidy izahay.
Duolingo dia havaozina amin'ny fanatsarana ho an'ny takelaka
Duolingo, ny fampiharana tonga lafatra hianarana anglisy, dia havaozina amin'ny fanatsarana ho an'ny takelaka, ny fanohanana ny maody an-toerana ary ny birao mpitarika.
Ny mpamaky dia mpamaky RSS iray hafa tsara ho an'ny Android
Ny gazety dia eo anelanelan'ny Feedly sy gReader, mampiseho ny tenany ho safidy tsara hamaky ny RSS feed anao avy amin'ny Feedly Cloud hatramin'ny 1 Jolay.
ES File Explorer, mpikaroka rakitra tsara indrindra.
Fitaovana Android maro no tonga tsy misy mpitantana rakitra mendrika (na tsy misy mihitsy). Na anao izany, ...
Ireo fampiharana 5 tsara indrindra hoentina eny amoron-dranomasina
Isaky ny fahavaratra tonga dia manontany tena isika hoe inona no hoentina eny amoron-dranomasina: elo, fiarovana ... Ary inona ny fangatahana hoentina eny amoron-tsiraka amin'ny terminal Android antsika?
Ahoana ny famindrana ny RSS RSS anao avy amin'ny Google Reader mankany amin'ny Cloudly Cloud
Asehonay anao ny dingana tokony harahina mba tsy hahavery ny RSS feeds anao ary hahafahanao mampiasa Feedly Cloud miaraka amina fampiharana toa gReader na Feedly mihitsy.
Milalaova Fifa 13 amin'ny findainao
Amin'ity horonantsary manaraka ity izahay dia mitondra fampiharana anao antsoina hoe EA SPORT FOOTBALL CLUB. Amin'izany no ahafahanao manana ny statistika rehetra ...
XPrivacy dia manolotra fifehezana feno ny fahazoan-dàlana omena ho an'ny rindranasa napetraka tsirairay
XPrivacy, rindranasa miseho miaro ny fiainanao manokana sy ny fomba itondran'ny rindran-damina fampahalalana isan-karazany amin'ny terminal Android anao.
Izao tontolo izao dia malalaka tokoa ny fakàna sary izay ahitàna zavatra marobe: tonian-dahatsoratra, sivana, fanovana kalitao ... Ao amin'ny Play Store avokoa izany rehetra izany.